Ngathi | Ixabiso lethu | Kutheni thina
UKUGCINWA KOMATSHINI licandelo lemveliso yoomatshini BOKUGCINA INDUSTRY GROUP, egxile ekuthengiseni oomatshini kunye nezixhobo ngaphezulu kweminyaka eyi-10. Ikakhulu benza oomatshini imveliso kunye imigca ibandla iimveliso zeplastiki, ezifana extruders zeplastiki, imigangatho zeplastiki, iinkangeleko zeplastiki, bhanya yeplastiki, iingxowa zeplastiki kunye nezinye izixhobo.
Oomatshini kunye nezixhobo ezisisiseko kwimveliso yenkampani yethu iye eneemfuno ezizodwa kwimveliso yezixhobo zeplastiki extrusion ukususela 1970. Ngembali ende kunye namava atyebileyo, uyilo lobuchwephesha, iqela lokwakha kunye nofakelo, amaziko axhasayo agqityiweyo, sinokubonelela abathengi ngeseti epheleleyo yezisombululo, ngesona sicwangciso silungileyo sokuseka imigca yendibano okanye iifektri ezivulekileyo. Sibonelele ngezixhobo zemveliso ezigqwesileyo kwiinkampani ezininzi ezaziwayo kwimarike yesizwe neyamazwe aphesheya, kwaye siphumelele igama elihle kwintengiso.
Kude kube namhlanje, oomatshini kunye nezixhobo sele zithunyelwe kumazwe amaninzi, kubandakanya iRussia, uMzantsi Korea, iMalaysia, iVietnam, iPhilippines, iArgentina, iBrazil, iMexico, uMzantsi Afrika, iJiphutha, iNigeria, iUzbekistan, iIndonesia, iIndiya, iSaudi Arabia kunye nezinye amanye amazwe.
Ngokuhambelana nomgaqo wokuphumelela kwihlabathi ngokuthembeka, ukubambelela kwifilosofi yeshishini "asiboneleli ngeemveliso kuphela, kodwa nodumo kunye nomgangatho", siya kuqhubeka nokufunxa ubuchwephesha obutsha kunye nokwazisa izixhobo ezitsha ukubonelela abathengi ngezisombululo ezingcono, izixhobo kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa.
Ilifa kunye nokuphuhlisa ishishini lesizwe laseTshayina kwaye ube ngumnikezeli ophambili wezixhobo zeplastiki.
Nika ixabiso kubathengi, wenze ixabiso kuluntu
Intsebenziswano yokuphumelela iyintsika yeshishini elihlala liluhlaza.
Mveliso KEPT KOMATSHINI uvelisa isiphelo eliphezulu izixhobo zeplastiki extrusion. Inkampani ijolise kwimigca yemveliso yamatye eplastiki edityanisiweyo e-SPC, umgangatho we-WPC, itemplate yokwakha ye-PP, ipaneli yomnyango weplastiki, kunye nebhodi ye-PVC. Iqela lethu, ngokusekwe kwingxelo eqhubekayo evela kwindawo yabathengi kunye nokufunxa iteknoloji yaseYurophu, iphumelele ngempumelelo itekhnoloji yokulungelelanisa i-SPC, kwaye isebenzise ngempumelelo inkqubo ye-extrusion ye-European parallel yokuvelisa kunye nokulungiswa kwamatye eplastiki edityanisiweyo.
Umzi-mveliso wethu unamava angaphezu kwama-20 eminyaka kwicandelo lokuvelisa izixhobo zephepha le-PVC elinjengebhodi ye-PVC, ibhodi ye-vinyl, iphepha lokulinganisa le-PVC, ipaneli yeplastiki yomthi, njl njl Izixhobo zithengiswa eYurophu, kuMbindi Mpuma, e-Afrika. , Mpuma Asia kunye namanye amazwe kunye nemimandla, kwaye iphumelele igama abathengi basekhaya angaphandle.
Inkampani yethu ibonelela ngeeprojekti zokujikajika kuwo wonke umgca, kwaye ibonelela abathengi uluhlu olupheleleyo lweenkonzo ngokweemfuno zeprojekthi yabathengi. Inkampani ihoya kakhulu ubuchwephesha bamanye amazwe, iqhubeka ifunxa kwaye igcina, iyaqhubeka iphucula kwaye ivuselela ngokuzimeleyo, yenza konke okusemandleni ayo ukuba inoxanduva, iyinyani kwaye iyila izinto ezintsha, icinga oko abathengi bacinga ukuba ngumgaqo wenkampani ongaguquguqukiyo, kwaye ikunika ngentliziyo epheleleyo Isicwangciso sophuhliso lwemveliso, kwaye kwangaxeshanye sikubonelela ngeenkonzo zokuthengisa ngaphambi kokuthengisa, ukuthengisa kunye neenkonzo zentengiso, ukuze ungafumani kuphela iimveliso ezilungileyo, kodwa uzive nomxholo wenkonzo ekumgangatho ophezulu eziswa yinkampani kuwe.
Sikholelwa ngokuqinisekileyo ukuba iinzame zethu zinokudala elona xabiso kunye nempumelelo kuwe!